Indlela yokugwema izinkinga zezinwele zonyaka
Shintsha esimweni sesimo sezulu, izilinganiso zemvelo kanye nezimo ezijwayelekile zesimo sezulu - konke lokhu kungathinta isimo sezinwele. Uma ungenzi lutho futhi uvumela izinto ukuba zihambe zodwa - lokhu kungabangela ngisho nokulahlekelwa ngaphambi kwesikhathi. Indlela yokugwema izinkinga zezinkathi ngezinwele, futhi kuzoxoxwa ngezansi.
Ubusika - izinwele zihlushwa isithwathwa nomoya owomile
Ubusika cishe kuyinkathi enzima kunabo bonke izinwele. Uma kubanda ngaphandle, kodwa umoya unomile kakhulu emakamelweni okushisa. Uma ubeka izinwele zakho ngaphansi kwesitsha esifudumele, kubi kubo, kodwa uma uya emakhazeni ngaphandle kwalo - kuyoba kubi nakakhulu. Khona-ke ngeke ukwazi ukugwema izinkinga ngezinwele.
Isici esiyingozi kunazo zonke esingabangela ukushaywa izinwele ngokuzumayo kungumoya obandayo kanye neqhwa. Ukuqothulwa kwe-scalp kungaphazamisa izinwele zezinwele. Kunezimo zokulahlekelwa izinwele eziphelele emadodeni avelele ekuvezeni isikhathi eside kubanda - bahamba ubusika ngaphandle kwesihlokwana. Ngakho, ebusika kubalulekile ukuvikela izinwele nezimpande zawo. Kodwa lesi silinganiso sibalulekile lapha. Ukushisa izinwele akuyona into eyingozi kakhulu kune-hypothermia. Ikhanda akufanele libe neludumele kakhulu futhi lingenakunyakaziswa - liphazamisa ukwenziwa kwe-microcirculation esikrinini, izinwele zithola izakhi ezincane, ziba buthakathaka futhi ziqala ukuphuma. Ngaphezu kwalokho, izigqoko ezifudumele kakhulu zenza ukuvikeleka kwe-sebum ngokweqile, okugqoka iziteshi futhi kudambise isimo sezinwele. Ngakho-ke, izinkinga ezinjengezinhlanzi kanye nokwanda kwezinwele zingase zenzeke. Ngaphezu kwalokho, izinwele ezinamafutha zibukeka zibi kakhulu, kunzima ukubeka, ngakho-ke sisebenzisa i-varnish noma imousse. Lokhu, nakho, kungathuthukisa okwesikhashana ukubukeka kwezinwele zethu, kodwa kuqhubeka nokubuhlungu isimo sabo.
Isizathu esiyinhloko sezinkinga zonyaka ngezikhathi zasebusika yizinguquko ezibukhali zokushisa. Uma singena emgwaqweni obanda kubandayo, sibheke isifo sokushisa. Imikhumbi yegazi igxilile kakhulu, inqume izinwele zezinwele kusukela ekunikezeni "kokudla" ngendlela yezakhi nezomoya. Ngokuvamile lezi zinkinga zingase ziphakame lapho sihamba ebusika sinenhloko engaziwa. Olunye usongo ezinyaweni lomoya omile emakamelweni okushisa. Nakuba lokhu kungeke kube yimbangela eqondile yokushaywa izinwele, kodwa ezimweni ezinjalo baba brittle, ezinzima futhi ezomile. Ukuvimbela lokhu, ngisho nasebusika, ikakhulukazi uma sichitha isikhathi esiningi ehhovisi eliphephile emoyeni, kubalulekile ukuphuza okungenani amalitha ama-1.5 wamaminerali.
Izinwele - izinwele zidinga amavithamini
I-Avitaminosis ibangela ukukhubazeka jikelele kwenyama yonke. Izinwele nazo zihlupheka. Into esabekayo kakhulu ukuthi ukungabi namavithamini akuveli esimweni sezinwele ngokushesha. Ekuqaleni ungase ubonakale ukuthi konke kuhlelekile. Futhi emva kwezinyanga ezingu-2-3, izinwele ziqala ukuphuma ngamandla. Khona-ke ukuthatha ngisho namavithamini amahle kakhulu angeke ukwazi ukusiza. Isikhathi silahlekile. Nakuba kungekho isizathu sokwesaba - naphezu kokwesaba, wena-ke, ngeke ulahlekelwe zonke izinwele zakho! Kubalulekile ukufeza inqubo yokuqinisa izinwele zezinwele ngokudla kwamavithamini nama-microelements. Ngakho uqinisa izinwele ezivele zikhona, futhi izinwele ezintsha zizokhula ziqinile futhi ziphilile.
Ngisho noma unesiqiniseko sokuthi ukudla kwakho kulinganisela ngokwanele - ukudla okungaphezulu kwamavithamini kuzosiza ukugwema izinkinga ngezinwele. Enye izinwele zidinga i-zinc, i-vithamini B nesulfure - kulokhu kungcono ukuthenga isakhiwo esikhethekile ekhemisi. Ungakwazi futhi ukuxazulula lezi zinkinga zezinwele zonyaka ngezidingo zamakhambi. Isiza ikakhulukazi i-horsetail ne-turnips emhlophe. Isizathu esivamile sokushaya izinwele entwasahlobo singase sibe ne-anemia. Uma ukulahleka kwezinwele kukuphazamisa, kungani ungathathi igazi - ukunquma izinga lamaseli abomvu egazini, i-hemoglobin nensimbi. Uma unesidingo, udinga ukuyiphatha futhi ugweme izinkinga zonyaka.
Ehlobo - amandla okubhubhisa ilanga nosawoti
Izimo ezinhle kakhulu zezinwele zethu - cishe ngo-C 0 ngo-20, hhayi ilanga elinamandla kakhulu nomoya omanzi. Nokho, ehlobo, lokhu akuvamile ukuthathwa. Isongo esikhulu kunazo zonke izinwele zithonya lama-UV. Ngenxa yabo, futhi kunezinkinga eziningi ezinwele. Ingozi enkulu kunazo zonke ibonakala izinwele ezikhanyayo nezinwele ezingenayo i-melanin, i-pigment ehlanganisa ukuvikelwa kwelanga.
Uma unezinwele ezinamafutha, kubonakala kuwe ukuthi ukuhlala elangeni kuthuthukisa ukubukeka kwawo. Kodwa lokhu kungukukhohlisa nje. Emasontweni ambalwa ungaba nezinkinga ezinkulu nezinwele zakho. Okuyingozi kakhulu ukuhlanganiswa kwelanga ngokugeza emanzini aneklorini noma osawoti. Ilanga lilahla isikhumba sendawo yokuzivikela, futhi usawoti nezinye izinto eziyingozi zingangena phakathi kwenkemba yezinwele, zibulale. Ukuvimbela lokhu, emva kokugeza, geza izinwele ngamanzi ahlanzekile kanye ne-shampoo elula.
I-autumn - ezinkingeni ezinwele kufanele isole ... estrogen
Ngisho noma izinwele zakho ziphilile zonke zasehlobo zasekuqaleni, ekwindla zingase ziqale ukuwa. Kulokhu, njengomthetho, ... amahomoni kufanele abekwe icala. Ngokombono osebenzayo, i-hormone yesifazane estrogen ezinyangeni zasehlobo nasehlobo zimelela ngokujulile ngaphansi kwethonya elangeni. Ekwindla, ukuvuselela kuyama, izinwele ezakhula kakhulu ngaphansi kwethonya lama-estrogens, ziqedele umjikelezo wazo wokuphila. Isimo esifanayo, naphezu kwesilinganiso esikhulu, sizwa abesifazane emva kokubeletha.
Ukulahlekelwa izinwele ze-Autumn yiyona ejwayelekile kakhulu ezinkingeni zonyaka. Akungabazeki ukuthi kufanele sikhathazeke kakhulu - akuvamile ukugwema izinkinga zezinwele ekwindla. Uma okujwayelekile ehlobo ukulahlekelwa izinwele ezingu-50 ngosuku, bese kuthi ekwindla lokhu kukhula kwanda izinwele eziyi-100 ngosuku. Sekuyisikhathi eside sekubhekwa njengento ebangelwa isigqi semvelo semvelo. Ngaphezu kwalokho, isimo sokulahleka kwezinwele sithinta zonke izilwane ezincelisayo, kuhlanganise nezifuywayo zethu - izinja namakati.
Naphezu kwalokhu, ngalesi sikhathi kumele sinikeze ukunakekelwa kwezinwele okufanele: ukusika izinwele, ukuqeda ukuphela kokulimala, ukusebenzisa ama-mask acebile okondla. Futhi ekwindla, imimoya enamandla ibangela ukulimala kwezinwele zethu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izinwele ezincane nezinde. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uphume emgwaqweni ngesimo sezulu esiphezulu, faka izinwele zakho kahle.
Izinwele ezomile: isifuba sezinwele
Insimbi yezinwele iqondisa
Isigqoko se-Yoghurt se-papaya nezinwele ze-kiwi
Bezmiamachnaya ukudweba izinwele: ikakhulukazi ukubola ekhaya
Ikhalenda lamaLunar yezinwele zokukhwabanisa ngoJulayi 2017 - Izinsuku ezithandekayo nezingenakulungiswa zokudaya nokusika izinwele, kanye nezipikili
Ubude bezinwele ezingu-2016, ubude bezinwele, isithombe
Indlela yokuthola injabulo nokuvumelana kwangaphakathi
Imvula noma isithwathwa: kuyokwethwa nini ngo-2015
Ukubalwa kwezinombolo zesayensi, izinombolo zemilingo
Yini ebaluleke kakhulu ukuthanda noma ukuthandwa?
UGluck'oZa wagxekwa ngokulungiselela i-Halloween
Ukufunda ukwenza izimonyo eziphumelelayo ngemicibisholo
I-biography yomdlali we-Facundo Arana
Ama-Berry juice nemiphumela yawo emzimbeni
Kusukela kokuthini okutholayo - esinye sezizathu
Ukupheka kobuhle: I-Eco Line ye-Oily Skin Skin Mahash Fabulously Clean
Izinwele zokukhishwa kwekhalenda lunar: May 2014
Ngithanda indoda eshadile
Indlela yokuxazulula ukungezwani kwangaphakathi, phumula
Indlela yokuthola isibalo esincane emva kokubeletha: iseluleko somama wezingane eziningi u-Alla Dovlatova
Ukwelashwa kwe-herpes ezindlebeni ngezokwelapha zomuntu